High End Kitchen foset Brushed Nickel Dọọ Down
Home / Faucets kichin / Wetuo mmiri / WOWOW Top gosiri dọlitere Kitchen Faucets Single Oghere
WOWOW Top gosiri dọlitere Kitchen Faucets Single Oghere
gosiri 4.98 nke 5 dabeere na 41 ahịa Fim
(41 ahịa reviews)
A na-eji akwa a na-esi nri kọbọd a ma ọ bụ nke na-eduga ya na mmiri. SUS304 dị mma gburugburu ebe obibi ma nwee ahụike, ahụike anyị dabere na onye nlekọta anyị. Enwere ike idozi ya site na ntụgharị na-ekpo ọkụ na oyi, ọ dị mfe iji dochie, dị mfe ịwụnye, kpochapụwo na mara mma, ọ dịkwa mma maka ime ụlọ ịsa ahụ na kichin dị iche iche.
Wetuo isi mmiri esi ebe a na-asa ihe 2310301
Chohọrọ mmiri ịsa ahụ na kichin, otu ihe dị mkpa bụ ahụike gị na nchedo gburugburu gị. Isi mmiri a na-asa esi na mmiri emeghị ka ọ sie ike, nwere ike imetụta ahụ ike gị n'ihi nsị na-egbu egbu nke na-agwakọta na mmiri ọ drinkingụ drinkingụ gị. A na-eji mmiri nhicha ọla na ihe dị mma mee nke WOWOW na-adọba mmiri esi na WWOWOW. Na mgbakwunye na igwe anaghị agba nchara, mmiri ndị a na-akwada ebe a na-asa kichin na-enye gị uru kachasị mma maka ego na usoro nke ịdị mma, ịdị ike na iguzogide. Igwe nchekwa ceramic diski nke dị elu nke mmiri a na-adọba na kute kichin nwere ike ịdịkarịa ala 500,000 usoro mmiri na-enweghị mmiri. Nke a karịrị ọkọlọtọ ụlọ ọrụ ọ bụla. Nke kachasị, gbatuo mmiri esi nri nke WOWOW chekwaa mmiri n'ihi isi mmiri ọhụụ. N’ezie, ị ga-ahụ nke a na ụgwọ mmiri gị!
Na agbanyeghi ahụike, arụmọrụ ndị a na-akwada ebe a na-esi esi ebe ekwu okwu dị iche iche dịkwa iche iche. Enwere ike iji multi-functionalsprayer na ụdị abụọ: iyi siri ike mgbe ị na-ejupụta pan na mmiri dịka ọmụmaatụ, na ịgba siri ike maka ihicha efere dịka ọmụmaatụ. Otu mmiri eji eme nri kichin na -eme ka ọ dị mfe ịhazigharị ọnụọgụ na ọnọdụ mmiri. N'aka nke ọzọ, swivel spout nwere ike ịtụgharị ogo 360 maka nkasi obi kachasị. Nke ikpeazu mana opekata mpe, mmiri pọmpụ ahụ awara awara 1.5 m iji nye gị mpaghara sara mbara ịcha 80 cm. Nke a dị mma karịsịa mgbe ị nwere ụlọ ịsa ahụ mmadụ abụọ, mana yana ime ụlọ kichin ndị a na-akwada mmiri ime ụlọ ịsa ahụ nke WOWOW nwere ike ịdị mma. Agaghị enwe otu ebe n'ime ma ọ bụ gburugburu ebe ị na-asa kichin ma ọ bụrụ na a na-adọka mmiri esi na WOWOW.
Stylish ada ada esi esi esi mmiri esi esi esi
E wezụga ahụike na arụ ọrụ, n'ezie, ị chọrọ nkecha nkpada-esi ebe a na-asa mmiri riipu. Fauce ebe a na-esi ebe a na-esi nri ga-eme ka otu jikọrọ ọnụ na kichin gị niile. Peoplefọdụ ndị mmadụ anaghị eche echiche banyere nsị mmiri kichin. Mgbe mmadụ batara na kichin, ọ ga-adọrọ uche ya na akpukpo nri kichin ya. Ọ bụ ezie na mmiri ịsa kichin dị obere, ha nwere oke mmetụta na mkpokọta kichin gị. N'ihi ya, ọ dị oke mkpa na ị ga-eji amamihe họrọ kichin nke kichin gị, ebe ọ nwere ike inye kichin gị nnukwu nkwalite. Ngwurugwu nickel a d ị na-akụ steepụ mmiri nke WOWOW ga-enye gị nke a dị elu n’enweghị obi abụọ ọ bụla.
Bulie nsị mmiri esi na kichin na-enye nnukwu uru karịa ụdị ụlọ ịsa ahụ ọzọ. N'ihi ụsọ mmiri a na-akpọghari, ị nwere ike ịgbatị nsị mmiri kichin gị ngwa ngwa. Site na njirimara a dị mfe, ị nwere ike iru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla ma ọ bụ n'akụkụ ebe ị na-asa kichin. Na agbanyeghị, ọsụsọ a na-agwakọta n'ime mmiri ọsụsọ gị, yabụ ị gaghị ahụ mmiri ọ bụla mgbe ị na-ejighị nsị mmiri kichin gị. Nanị ọnọdụ bụ inwe usoro nkwụghachi azụ dị elu. Ọ ga - abụ ihe enweghị afọ ojuju ị ga - ewetu nsị nsị mmiri kichin mmiri nke mmiri anaghị ebugharị dịka o kwesịrị. Ọ ga-arụ ọrụ n ’100% nwayọ n’enye gị nkasi obi kachasị.
Jiri mmiri ndị a na-agbadata ebe a na-esi na kichin welie kichin gị
Ikpu faịlị kichin nke WOW na-eme ka ndụ gị dịkwuo mfe. Oge gboo nke ike ndọda bọọlụ nke kichin kichin kichin na-eme ka ọ dị mma ka ọ dọpụ ma dọpụ mmiri mmiri. Bọọlụ ike ndọda na-eweghachi sprayer ahụ na akpaghị aka, yabụ na ị gaghị agba mbọ onwe gị mgbe ị mechara ịsachasị kichin gị.N'ihi ya, kichin kichin kichin nke WOW ga-abụ nkwalite niile maka kichin gị, n'ihe gbasara ma ịke na arụmọrụ. Dị ka e kwuru, kwopu kichin kichin nke WOW na-enye ọrụ mmiri 2: iyi na ịgba. Ọrụ abụọ a na - enye gị ohere ịgbanye ngwa ngwa na ergonomically site na ịgba na ntanetị ma ọ bụ na ntụgharị. Nwere ike ime nke a site na iji mkpịsị aka dị mfe na-enweghị ịkwụsị mmiri mbụ. Bọtịnụ na-agba ọsọ nke ọma ma na-enye nkasi obi kachasị.
Dị ọnụ ala dị ọnụ ala na-akwada isi ebe a na-asa esi na kichin
Qualitydị mma na-abịa ọnụahịa mana ọ bụghị na WOWOW. WOWOW arụpụtala iji nye gị ọnụ ahịa akwa dịdebere kichin nke ka dị ọnụ ala. N'ihi nnweta ngwa ya nke ọma na imepụta ngwa ngwa na usoro nyocha, WOWOW nwere ike ịnye gị ịkwatu nsị nke kichin nke ga-enwe ike ịsọ mpi A na-ere kichin ọ bụla, ma n'agbanyeghị na pere mpe nke ọnụahịa ndị ahụ. Ya mere, anyị kwenyesiri ike na-ekwu na ị gaghị ahụ ihe ọ bụla na - agbada nsị mmiri kichin na ọnụ ahịa dị mma karịa WOWOW. N'ihi ya, WOWOW na-enye gị ọnụahịa kachasị ọnụ nke ị ga-ahụ n'ahịa.
Ọbụghị n’efu, WOWOW na-enye nkwa mmụkọ ụbọchị 90 na nkwụcha mmiri esi na kọmpụta ya. Mgbe ị chere na ndọkpụ ụlọ mposi anyị abụghị ihe ị tụrụ anya ya, anyị ga-akwụghachi gị n’enweghị nsogbu ma ọ bụ ajụjụ a jụrụ. Dị Mfe dị ka nke ahụ. Anyị kwụ ọtọ maka ngwaahịa anyị, anyị kwenyesiri ike na anyị na-enye akwa nsị nke kichin ma ọ bụ nke dị n'elu. Yabụ anyị maara na ị gaghị emechu gị ihu ma ị ga-enwekwa ihe ịtụnanya na mmiri ịsa ahụ ọhụrụ gị. Anyị nwere ọtụtụ ndị ahịa na-alọta site n'akụkụ ụwa niile, anyị ji n'aka na ị ga-ahọrọ anyị oge ọzọ.
Mfe wụnye na-ekwe nkwa
Mkpọsapu ọdọ mmiri esi na WWOWOW dị mfe maka ịwụnye n'ihi interface dị mfe. You nwere ike iwunye akwa mmiri a naanị n'otu nzọụkwụ. Ya mere ị nwere ike ịwụnye mgbada ebe a na-esi ebe a na-edebe kichin. Kwesighi iwere ndi okacha iku ahia ego ka i wee chekwa otutu ego ebea. Isi nri nke ebe a na-asa kichin nke WOWOW na-eji efere oche, bọl ike ndọda, otu hoses mmiri na-ekpo ọkụ na mmiri oyi yana otu ngwa mgbakwunye. Nhazi a zuru ezu na-ekwe nkwa ịrụnye nke arụmọrụ ma ọsọsọ. Dị mfe nke ahụ!
Uru nke ịkwatu ebe a na-asa kichin ososo n’oghere:
Nick Ezel nickel na-agbaze mgbe niile
· Elu di elu na-akwatu nsomoku mmiri
· Nkasi obi aka na-akasi gị obi
· Ọrụ abụọ
SKU: 2310301 Categories: Faucets kichin, Wetuo mmiri Tags: Nickel azọrọ, Gbatuo, Ogwe Nanị
21.3 x 11.2 x 2.8 sentimita
15 sentimita asatọ
1or 3 Oghere Ugwu Oghere
31.5 sentimita asatọ
7 sentimita asatọ
9 sentimita asatọ
Kitchen / Indoor / Commercial / Restaurant / /lọ / 1or2 sinks
Igwe eji esi nri kichin; 50cm Na-ekpo ọkụ & Nzuzo Mmiri Hoses; Kpochapu ihe ntanye; Efere oche; Arịọnụ ngwa
Anyị dochiri otu ochie moen kichin foset na nke a na enweghị m ike inwe obi ụtọ karị! Obi tọrọ di m ụtọ mgbe ọ mepere igbe ahụ. Ọ hụrụ ọkpọkọ ahịhịa akpọrọ na ụfụfụ ma ghara ịgbachi nkịtị n'oge ụgbọ mmiri. Ihe ọzọ ọ masịrị ya bụ ntuziaka maka ịwụnye nke doro anya ma dị nkenke. Nsogbu ọ bụla nwere ike ịbụ adreesị na onye nrụpụta ngwaahịa a. Site na ntụzi aka rue na ihe nkwụnye na washers nke agụnyere. Ntinye dị mfe ma ọkpọkọ mmiri malitere na nke mbụ.
E nwere a egwuregwu na-agba ọsọ n'etiti anyị na ihe ọ bụla oru ngo anyị na-na nke ga-ewe otu awa ma ọ bụ abụọ; ga-ewe anyị ụbọchị abụọ. Ọ bụghị nke a ka anyị nwere nsogbu karịa iwepu eriri mmiri ochie ma e jiri ya tụnyere obere oge 2/1 iji tinye nke a!
Ezigbo ọkpọkọ mmiri, ọkachasị mgbe ọtụtụ ndị masịrị ya na-aga ọtụtụ ego. Anyị rapaara na ngwakọ ngwongwo plastic / aluminom mgbe anyị kwagara n'ụlọ ọhụrụ anyị. O si n’ime pọmpụ ahụ gbapụ, anyị na-alakwa mmiri n’iyi. Nke a bụ nnukwu nkwalite maka abụ. Anyị dokwara ihe ngwaike valvụ ebe ọ bụ na nke ahụ agbapụ ma gawa. Ọ bụrụ n’ịhapụ ọrụ a, a ga m asị gị buru ụzọ buru ụzọ mee ihe iji mezuo ya. Gaghị enwe mmechuihu.
Enweghị m mmasị n'ịrụ ọrụ plumbing. O di nwute na, m na wunye ihe fosets (Moen, Delta, Pfister) karịa ka m chọrọ icheta. Ihe a WOWOW kachasị dị mfe nke m megoro. Kama ịtinye ya na sink site na oghere miri emi nke ụdị ndị ọzọ na-enye, nke a na-eji ihe nkedo setịpụrụ nke dị mfe karị mgbe ị na-etinye n'ime kabinet efu na-enweghị oke na ohere. Akara ahịrị ọkụ na oyi na-atụ doro anya site na ntinye agba, yana okwu ndị dị ọkụ na oyi. Dị ka ego ọzọ, ọ bịara na nkwụnye 3/8 ″ ruo 1/2 which nke m chọrọ ijikọ na valvụ shutoff. Nke a chebere m njem ụlọ ahịa ngwaike. Ọ bụ ihe kacha mma foset iji wụnye mgbe.
Enwere m obere ọkpọ mmiri ruo nwa oge wee chee na m ga-anwale onye a n'ihi na ọ dị mma karịa ndị ọzọ m hụworo. N'ezie, ụjọ jidere m n'ihi na ọ bụghị nnukwu aha, ọ dịkwa obere ka anyị jiri aha ukwu gaa. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ọbụlagodi m nwere ike iwunye ya na nke ahụ na-ekwu ọtụtụ (dị oke mkpa!). Ntuziaka amachaghị m nke ọma mana nke a bụ mbido mbụ m na ihe ọ bụla dịka nke a (daalụ maka google na youtube)! Ekwesiri m ịzụta njikọta mgbatị mmiri iji nweta mmiri dị ka ọkpọkọ mmiri ochie m nwere eriri ọla kọpa siri ike na-agbadata na ya ma nke a nwere njikọ njikọta ugbua. Mgbatị ahụ erughị $ 10 na nnukwu ụlọ ahịa ngwaike igbe. Enwere m mmasị na nke a n'ihi na ọ na-agwakọta nke ọma na kichin kichin ọkọlọtọ m n'ihi na ọ bụghị ihe na-egbu maramara ma ọ ka dị ọhụrụ ma dị ọcha. Ọ bụ ezigbo ngwakọta nke nwelite na-enweghị oke ọfụma. M ike na-na nnukwu ite n'umu olu mfe ma, foset bụ bụghị otú nnukwu na ya anya nke ọma na m obere kichin. Swivels ọma / were were, oké ịgba / iyi, mfe ịgbanwee n'etiti. Ukwuu, bara nnukwu uru. Ana m akwado. (Akwụghachighị m n'ụzọ ọ bụla maka nyocha a ma enweghị njikọ ọ bụla na ụlọ ọrụ ahụ. M na-enyo enyo mgbe niile banyere nyocha akwụ ụgwọ.)
Maka ego ị nweghị ike imeri pọmpụ a! Ọ nwere atụmatụ ndị ọzọ dị oké ọnụ faucets nwere. Usoro dum dị mfe iji wụnye. Ihe mgbaaka na ihe nkedo na-amasị m iji tinye eriri mmiri ahụ ka ọ banye. A na-akpọ hoses niile aha na ha dị ka nnukwu ọrụ. Ozugbo ị gbakwunye ibu ahụ, ịgba ahụ na-ewepụ ezigbo mfe ma weghachite dịka ọ kwesịrị. Naanị arụ ọrụ arụ ọrụ m hụrụ bụ bọtịnụ na-agba. Ọ nwere toggle ụdị bọtịnụ ga-ịgbanwee n'etiti mgbe iyi, ịgba na Nchikota ịgba na iyi. Ntugharị a bụ ụdị floppy ọ ga - afọ nke nta ka ọ gbanwee ọkara ịgba na iyi iyi naanị site na imetụ ihe ntanetị. Oge ga - agwa otu bọtịnụ a si ejide. Aga m akwado igwe mmiri a!
Azutara m nwa m nwoke na nwunye nwa m pọọdụ a maka onyinye onyinye ụlọ. Ha nwere pọmpụ chrome ochie na-enweghị sprayer (ha enweghịkwa asacha efere). Ebuuru m iwu ọla kọpa b / c echere m na nke ahụ ga-adaba na ihe ha nwere. Ha kpebiri na ha chọrọ nwa ojii kama, n'ihi ya, eweghachiri m ọla nchara n'ụlọ ahịa Kohl anyị (dị mfe!) Wee nye iwu nwa ahụ. Ka m gwa gị - ọkpọkọ mmiri a bụ ogbunigwe! Mmiri mmiri ahụ dị ebube ma onye ọrụ sprayer na-arụ ọrụ karịa ihe ọ bụla ọzọ ejirila m, ọbụnadị m ekwughị etu o si dị mma. Enwere m obere ụjọ ịtụ aha aha m anụtụbeghị, mana m ga-akwado akara a nye onye ọ bụla na-achọ ọkpọkọ siri ike ma dị ọnụ ala. Akwa Job KWE !!!
Anyị nwere ebe a na-edebe ihe nlele (Park Model) na ebe ezumike na Florida nwere obere igwe abụọ. Obere pọpụl dị na mmiri anyị nwere bụ nsogbu mgbe niile ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịsacha nnukwu ihe ọ bụla. Igwe mmiri a na-arụ ọrụ nke ọma.
M atọ kpakpando ahụ wụnye n'ihi na isi nke ọkpọkọ bụ ubé ibu karịa oghere anyị igwe anaghị. Ekwesịrị m ịdebanye ya iji mepee oghere ahụ. Amaghị m ma ọ bụrụ na oghere dị na sink anyị pere mpe karịa ka ọ bụ ma ọ bụ na isi mmiri ọkpọ ahụ dị oke oke na dayameta. Ozugbo m nwetara ya, nwunye m hụrụ ya n'anya. Nke ahụ bụ ihe dị mkpa !!! Nri ??
M hụrụ n'anya ọhụrụ m foset! M arụrịta ụka banyere ma ịzụrụ otu abụọ price si m obodo Home ebusa ga-abụ ihe "mma" ụzọ na-aga, ma m na a na ihe dị ka otu ọnwa ugbu a na m hụrụ ya n'anya. Ọ bụ nke ezigbo mma na anya dị ka m aga (ọzọ dị oké ọnụ, namebrand) foset.
Azụtara m ụlọ ọhụrụ n'otu afọ gara aga na onye wuru ụlọ wụnye pọmpụ dị ala. Obi dị m ezigbo ụtọ na ụzọ eriri mmiri a si arụ ọrụ. M ga-asị na obere mkpesa m bụ na mmiri na-apụta n'ike n'ike, mana ọ na-emebu m inwe mmetụ dị mfe mgbe m na-agbanye ya. Ọ dị mfe ịgbanwe site na mmiri ka ịgba, anaghị m eji bọtịnụ nkwụsịtụ ọ bụ ezie na ọ na-arụ ọrụ. Ọ bụ onye ọrụ aka wụnye ya na ọ nweghị nsogbu ịwụnye ya. Ọ bụ nnukwu uru ma e jiri ya tụnyere Home Depot ma ọ bụ Lowe n’ihi na ọ nweghị ihe dị na ọnụahịa a.
Ana m enye kpakpando 5 ruo ugbu a. Anyị nwere naanị ihe dị ka otu izu ma ọ bụ karịa ma hụ ya n'anya ugbu a. Ọ bụ nnọọ mfe iji wụnye na matte nwa imecha-aga nke ọma na anyị na konkiri countertops. Na nwa oge anyị nwere ya ọ na-ama pụta rụrụ ikpeazụ anyị foset anyị zụtara erughị 1 afọ gara aga. Ndị na-ere ere agaghị eme nke ọma na ngwaahịa ha. Anọ m na-achọ nwa oge ma nke a yiri nke kachasị mma maka ọnụahịa ma yie ka ọ nwere ụfọdụ nyocha eziokwu dị mma. Dị ka m kwuru na ọ bụ nanị izu ole na ole kachasị ma ọ ga-emelite mgbe e mesịrị ma nwee olileanya na ọ ga-enwe ezigbo akụkọ!
Igwe mmiri a aghaghị ịbụ ihe nzuzo kachasị ukwuu n'ụwa. Ọ na-arịgo nke ọma, mara mma, na-arụ ọrụ nke ọma ma na-akwụ ụgwọ nke ọma. Anyị dochiri ahịhịa rọba na RV anyị wee hụ nwunye n'anya. Nke a ga-arụ ọrụ nke ọma n'ụlọ.
Igwe mmiri a dị mma !! Abụ m nwanyị 22 afọ nke ga-agbanwe ọkpọkọ mmiri m na-arụ n'ụlọ n'ihi na nke mbụ m mebiri. Enweghị m ahụmịhe n'ịgbanwe pọmpụ mmiri ma ọ bụ ụdị mmiri ọ bụla, mana nke a dị mfe ịwụnye. Elere m vidio 1 nkeji na Youtube banyere otu esi etinye ọkpọkọ a ma mee ya na-erughị nkeji 20. Ọ na-abịa na ntuziaka, mana achọtara m vidiyo ka ọ dị mfe nghọta ma soro. Ugbu a, etinyere ya, ọ siri ike ma enweghị ntanye na nrụgide mmiri dị. Ukwuu nwere ike ikwu na nke a foset!
Obi dị m ezigbo ụtọ na mmiri mmiri a. Ọ bụ ezigbo ọnụ ahịa na m ga-anwale ya. Onye na-agba mmiri mmiri na-emegharị nke ọma naanị ị ga-pịa ya n'ime ebe. Ma m hụrụ gị n'anya na ị nwere ike ịgbanwe ya site na ịgba agba ka ọ gbaa mmiri na mgbe ị na-arịgo ya, ị nwere nhọrọ iji jide n'aka na njikwa gị nwere ike ịhapụ ka ịpịa windo windo gị. Anyị na-enwe ike atụgharị isi n'ihi ya, mgbe m na-eji ahụ, ọ ga-ada m window window. Mgbanwe na mfe!
Chaị! Nke a dị mma / mfe iji wụnye karịa ka m chere. Na-arụ ọrụ magburu onwe ya, usoro nwụnye dị ihe dị ka awa 1/2. Ọ bụrụ n ’ụjọ anaghị atụ gị ime mmiri mmiri nwere ike ịbụ ihe ruru unyi n’okpuru mmiri, ụmụ nwanyị nwere ike ime ya. Zọpụta ego gị site n'ịkwụ ụgwọ ọkachamara. Debe ụfọdụ nkpuchi ochie na-ewe oge gị na ntuziaka ị nwere ike ịchọrọ mmanụ na-agba agba iji belata ụfọdụ nkedo siri ike. Agbanyeghị, ịdị mma nke pọmpụ a ruru oge na ego gị. Obi dị m ụtọ na ihe m họọrọ.
Akụkụ kachasị sie ike nke usoro ahụ niile bụ iwepụ ọkpọkọ kichin ochie. Enwere obere akị na-ewepụsị. Ekwesịrị m iji akwa bezin wepu ya. Ekwenyere m na onye tinyegoro ọkpọ mmiri ahụ jiri ihe ọrụ adịghị mma iji mee ka eriri ahụ sie ike. Iji ọkpọkọ mmiri a, ejiri m aka m kpochapụ nnukwu ihe mkpofu dị ka akụ dị ka m nwere ike, mgbe ahụ, m na-asacha ya site na ịpị ihe atọ atọ na onye ọkwọ ụgbọ ala. Enwere ntuziaka iji gosipụta ka esi eme ya.
Ya mere, dị ka a tradesman m n'ezie obi abụọ mgbe nwunye m ekemende a ọkpọkọ na-arụnyere na kichin anyị n'ihi na onye m na mgbe nụrụ nke ika na abụọ ọ bụ n'okpuru $ 75 nke na-ejikarị pụtara na ị na-dochie ya na izu abụọ. Ma nke a dị iche na ọkpọkọ a na-eme ka ọ dịgide adịgide ma na-eme ihe n'eziokwu karịa nsị ọ bụla m nwere ma ọ bụ tinye na afọ iri na ise m nọrọ na azụmaahịa ịzụ ahịa ga-azụta akara a ọzọ iji nwaa ụzọ mmiri ndị ọzọ ha.
M hụrụ n'anya nke a foset. Ọ mara mma ma na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụ ihe magburu onwe ya maka ịsa efere na isi nri kamakwa maka inye m ahịhịa ihe ịsa ahụ nwayọ na ịgbara mmiri. Obi dị m ezigbo ụtọ na mmiri mmiri a. Onye na-ere ahia dị ukwuu ma ihe ahụ rutere n’oge na ọnọdụ dị mma. M ga-azụta n'aka onye ahịa a ọzọ.
Ruo ugbu a, emeela ihe m tụrụ anya na m ga-eme. Enweghị leaks, ọ nweghị mmebi mgbe ị na-egwu ya na ite na mberede ma enwere m ya naanị ọnwa ole na ole, yabụ na nke a abụghị ule mmekpa ahụ zuru oke.
Wụnye bụ ihe na-adịchaghị mkpa, ọkpọkọ na-abụkarị ụdị iwe iwe iji wụnye ka ohere dị ụkọ, mana e jiri ya tụnyere ihe ndị okenye na-eji akwa akwa nke chọrọ nnukwu spana na obere oghere, nke a dị mfe. Enwere m ike ịwụnye nke a na-enweghị aka abụọ.
Enwere m eriri mmiri a site n'aka handiman ka m wee ghara ikwu okwu banyere ịdị mfe nke nrụnye mana enwere m ike ịsị na ọ mara mma ma na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ dị mfe ịgbanwe n'etiti ịgba na iyi. Igodo nkwụsịtụ na-arụ ọrụ nke ọma, dịkwa ka ọ na-adaru ala. Enwere m obere mmiri kwụ ọtọ, kwụ ọtọ na nke a bụ nrọ m mezuru. Ọzọ ihe m hụrụ n'anya bụ na ị nwere ike jupụta ogologo containers na ala. Ọ dị ka nke ochie na nke ọhụụ ma nwee ọmarịcha mma. M ga-akwadoro ọkpọkọ mmiri a.
Naanị ịwụnye nke a ma ọ bụ ihe magburu onwe ya. Nke a bụ oge mbụ m na-edochi pọmpụ na nke m ma ọ were m ogologo oge iji wepụ nke ochie wee mee iji wụnye nke ọhụrụ. Ozugbo m nwere ochie ahụ, ọ were m n'okpuru 8 nkeji iji wụnye nke ọhụrụ a ma mee ka mmiri na-agafe na ya. Ọ nwere nnukwu ihe nkwụsị na isi ka ị ghara iru iru iji gbanye mmiri ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịdọrọ isi n'ofe mgbochi ma ọ bụ ihe.
The unit bụ ihe m na-achọ dochie m ochie kichin ọkpọkọ. Ọ bụ nnukwu ngwaahịa bara uru ma e jiri ya tụnyere ụdị ndị ọzọ ahapụghị aha ndị akpọrọ. Ọ dị mma ile anya, nke ọma wuru ma wụnye dị mfe. Achọrọ m ka ha nwee nhọrọ isi na-enweghị mmetụ aka. Azụrụ m otu iji dochie sprayer na m hụrụ ya n'anya. Super adaba. Echere m na ụdị imewe a tozuru oke na ọbụlagodi na ọ bụghị aha aha, ọ kwesịrị ịrụ ọrụ nke ọma. Ana m akwado ya.
Ahụrụ m ya n'anya! O yiri ka odi ezigbo nma. Ọ bụ nkwalite dị elu sitere na ihe m nwere na mbụ. Ọ na-amasị m ka ọ dị mfe ọ na-efegharị azụ na otu onye sprayer si alaghachi ebe ọ na-akpaghị aka. Nnukwu ịzụta mgbe e jiri ya tụnyere ụlọ ahịa igbe ndị na-ere ihe ndị a otu narị dollar ma ọ bụ karịa. N'ihi na ọ bụ ọnụ ala dị otu ahụ ka m nwere ike ị nweta ego iji wụnye ya. Ma ọ bụghị ya, m gaara anọ n'okpuru mmiri ruo ọtụtụ awa! Lol.
Mama ọkpọkọ ụlọ na-amalite ịwụfu ma achọghị ịme ihe na-agbanwe akwa na ihe niile. Enwetara nke a ma dochie ya n'ihe dị ka nkeji 30. Were nkeji iri abụọ were were nke ochie, yike. Ruo ugbu a, ọnwa atọ agaala, ọ ka na-arụ ọrụ dị ukwuu. M arụnyere na-enweghị efere na otu oghere na ọ na-ese akwa IMO. Naanị ihe ọ bụ na ọ nwere njikọ ntanetị ọhụrụ 20/3 and na ọtụtụ ndị okenye valves bụ 8/1 ″ ya mere lelee maka nke ahụ. Ma ọ bụghị ya, nnukwu ego na ngwaahịa dị ukwuu.
Nke a ọkpọkọ dị ukwuu. Anyị zụtara ya maka ime ụlọ ịsa akwa anyị, iji dochie pọmpụ nke na-efu okpukpu atọ ma ọ ga-adị naanị afọ ole na ole. Ọ dị mfe ịwụnye ma ọ dị mma ma na-arụ ọrụ nke ọma, nwunye m tụrụ aro ka anyị tinye ya na isi nri kichin anyị. Mgbe anyị dịtụ ọhụrụ kichin imi foset wears si anyị ga-eji dochie na otu n'ime ndị a, bụghị $ 3. otu (akara ọzọ) nke dị ugbu a. Anyị hụrụ ya n'anya, WOWOW foset.
Zụrụ a foset ka a dochie anya a leaky 2 ahụ anyị na-emeso. Nke a mara mma! Ọ dị ka ndị dị elu dị elu ị nwere ike ịzụta na ụlọ ahịa akụrụngwa mana na ọnụọgụ ole na ole nke ọnụahịa ahụ. Di m wụnye ya. Anyị nwere obere esemokwu mgbe ị na-etinye, mana echere m na ọ bụ okwu imepụta onwe ya nke a na-edozi ngwa ngwa mgbe di m kpụrụ ntutu ụfọdụ dị n'ụzọ ma na-egbochi pọmpụ ahụ ka ọ sie ike. Afọ zuru ezu na ịzụta.
Igwe a bụ ikuku iji wụnye ya. Na-arụ ọrụ dị ukwuu, na-amasị m ịke. Nwa mkpuchi ahụ dị mma ma na-eguzogide Mbipụta - nke m nwere ekele ebe m nwere nchegbu na ọ ga-egosi obere ihe ọ bụla. Naanị ihe m chọrọ ka ọkpọkọ mmiri a bụ magnet ma ọ bụ ihe yiri ya iji nyere aka dọta ọkpọkọ mmiri ahụ ozugbo ị mechara mgbe ị gachara ụfụfụ. Ọ na-adaba na ebe ọ dị mma mana ị ga-eji aka gị gbanwee ya. Igwe mmiri ahụ ejiri nwayọọ na-esi n'ihu mmiri na-asọgharị iji na-agba mmiri maka anyị ruo ugbu a. Enweghi nsogbu ọ bụla dịka ụfọdụ kwuru na nyocha (arụnyere 1 ọnwa gara aga). Anyị nwere nrụgide ka mma site na pọpụl a karịa nke ikpeazụ anyị. Anyị ejibeghị atụmatụ "kwusi" - ọ dị ka enweghị isi mgbe ị nwere ike gbanyụọ mmiri ọfụma, mana ikekwe ndị ọzọ hụrụ nke a bara uru. Na mkpokọta, nnukwu ịzụta.
Ngwaahịa ahụ rutere ngwa ngwa. M mere ya arụnyere site Roto-Rooter n'ihi na ụlọ m bụ 23 afọ na m chọrọ ọ bụla Plumbing mbipụta edozi site ọkachamara. Ọ na-enyo na onye pịba pọmpụ nwere otu ihe ọkpọkọ. Ọ na-agwa m afọ ojuju ya na ya. N'ime ụbọchị ole na ole anyị jiri ya, ekwenyere m ya kpamkpam. Obi dịkwa anyị ezigbo ụtọ. Ana m akwado ihe a ma ọ bụrụ na ị na-achọ nnukwu nkwalite na njirimara magburu onwe ya.
Hụrụ ya n'anya! Igwe mmiri ochie nke mere afọ OMG, mechara daa! Elere m ụdị a anya ma mara na m chọrọ ya.
Ahọrọ m nke a ma enwere m obi ụtọ 100%. Ọ na-arụ ọrụ na ịdị nro, ọrụ ịgba ahụ dị ike na ọrụ nkịtị zuru oke. Akụkụ kachasị njọ n'ime ya bụ ịpụ otu agadi, nnukwu mkpụrụ osisi na-egbu egbu egbuola nke ukwuu, ma nọrọ ebe agaghị ekwe omume!
Obi ụtọ na Camper!
Ezigbo ọkpọkọ. Ezigbo mma. M ga-atụ anya na-akwụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ na otu nke nnukwu ụlọ mma na-echekwa. Obi dị m ezigbo ụtọ na nzụta a. Naanị nkatọ m nwere bụ ị ga-eji aka gị hụ na edobere isi nri ozugbo ị dọtara ya. Ọ naghị akpaghị aka banye ebe kwesịrị ya na-enweghị ntakịrị mgbanwe. Nke ahụ bụ obere nchegbu.
Mmiri mmiri dị mma. Ọ nwere mma ịgba nhọrọ na kwusi nhọrọ.
Emeela ya ka ọ sie ike. N'ezie mfe iji wụnye. Anyị nwere ọtụtụ ndị ọzọ na-etinyeghị ma ọ bụ wepu mfe ma ebe nnukwu mgbu ga-arụ ọrụ. Nke a bụ nke kachasị mfe. O juru ya anya na ọ dị mma ma sie ike. Igodo iji gbanwee n'etiti ọrụ mmiri dị iche iche dị ntakịrị. Ọ ga-amasị m ntakịrị karịa ka ọ ghara ịmabanye n'etiti ọrụ mmiri 2 dị mfe. Na mkpokọta, Ọ dị mma.
M nọ na-achọsi ike nke ọhụrụ ọkpọkọ mmiri dị ka m 12 afọ kichin foset kpebiri na ọ bụ oge ntapu mmiri ma ka njọ ọ na-dripping n'okpuru sink nakwa. Akpọrọ m nwoke nwere nkwanye aka ma mechie mmeghe ọzọ bụ ụbọchị 4. Adịghị m ọkachamara na ọkpọkọ m wee gaa WOWOW wee nye iwu mmiri mmiri a n'ihi na ọ nwere nyocha dị ukwuu yana ihe ijuanya na ọ bụghị ọnụ. WOWOW kwuru na ọ ga-abịarute n'ụlọ m n'ime ụbọchị abụọ ma ọ mere. Obi dị m ezigbo ụtọ na nzụta a.
Nke a na-eji ọkpọkọ ọkpọ ọkpọ mmiri gbanwere ihe ọkụkụ na-arụ ọrụ. Nwere agbụ nke dochie rọba sprayer na hoses mgbe ha ga-amalite na-eri eri. Ọhụrụ a leghaara anya na nickel na-ada ala na-ele anya ọgbara ọhụrụ ma mara mma na igwe anaghị agba nchara kichin anyị! Dị njikere iji wụnye. N'ezie, site na ntuzi aka m, ụmụaka 2, 15 dị afọ gbanwere pọmpụ ahụ n'onwe ha. Apụghị m iri ari n'okpuru stinks dị ka m na-enwe ike LOL Ihe kachasị sie ike bụ ị nweta ụrọ mmiri ochie out
Ruo ugbu a, enwere ezigbo obi ụtọ na ịzụrụ ihe a, m ga-akwadoro ya!
Awụnyere m ọkpọ mmiri a na kichin m! Nwunye m hụrụ ya ma hụ ya n'anya. Anyị na-aga ile anya maka ụlọ ugbo, nke a bụ kpọmkwem ihe anyị chọrọ mfe ịwụnye, ịchọghị ntuziaka. Adịghị m nwoke nwere aka mana achọpụtara m ya !!! Were m nkeji 30 iji buru nke ochie wee wụnye nke ọhụrụ !!! Ga-azụta onye ọzọ ma ọ bụrụ na achọrọ m ya !!! Mbupu ngwa ngwa kwa
Ga-eji dochie m Moen kichin foset. Enwetụbeghị ụdị ọkpọ mmiri tupu mgbe ahụ ma ọ tụrụ ya n'anya! Chọtara WOWOW na ọnụahịa ahụ dị mma nke mere m nyere ya ogbugba. Ọ dị ịtụnanya, na-arụ ọrụ zuru oke na echekwara m na nrụgide mmiri m ka mma. Enyi m etinyere ya enweghi nsogbu ma oli.
Kemmasi foset styling na nnọọ mfe iji wụnye maka ime ya onwe gị. Ekwesịrị m ibelata ọkpọkọ ọkpọkọ ochie m yana ngwa ọrụ rotary ka njikọ ndị ahụ gbagọrọ agbagọ. Nzukọ ọhụrụ mere ọfụma dịka njikọ ndị enyere enyere nke ọma ma chee echiche. Ana m akwado ihe a nke ọma nye onye ọ bụla nwere mmasị iji dochie pọpụsị kichin ha.
Nke a bụ ọmarịcha ọkpọkọ mara mma nke dabara na kichin m nke ọma. M zụtara ya dị ka onye nnọchi nke a 13 afọ Moen foset. Echichi ahụ dị mfe, mana m ga-akwụnye plumber m iji wụnye ya n'ihi enweghị ike ịbanye na nsogbu ịwepụ ọkpọ mmiri ochie. O kwuru na ọ masịrị ya ma tinye ndị ọzọ nke ika a. Enweghi ike ikwu okwu na nkwenye dị ka m siri tinye ya, mana ọ bụ ezigbo mmelite.
Ọdịdị dị elu, akụkụ niile ejiri akara nke ọma akara maka njikọta yana mgbakọ dị mfe. Nnukwu nnukwu bolt - etinyere n'okpuru sink (iji chekwaa eriri mmiri ahụ) na-emeziwanye karịa ihe nkedo ndị okenye - ọ dị mfe iji aka site n'aka na ịkwọ ụgbọ ala. Nke a bụ ọkpọkọ nke kichin mbụ m rụnyere; ya mere, oburu na m nwere ike iwunye nke a, onye obula nwere ike
Anyị arụnyela eriri mmiri a maka izu ole na ole ugbu a ma ruo ugbu a ọ rụọ ọrụ zuru oke. anyị enweghị nri ehi mmiri ọ bụla ma ọ bụ uto ọ bụla. Di m wụnye ya n'ihe dị ka nkeji 30. Ọ dị ka ọ dị oke mma ma bụrụ nnukwu ọnụahịa ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ. Obi dị m ụtọ na m zụtara nke a! Ga-akwado!
Ọ bụ nnukwu ọkpọkọ maka ọnụahịa ahụ. Ejirila m pọpụl ndị ọzọ dị oke ọnụ n'oge gara aga, mana nke a na-arụ ọrụ nke ọma!. Ọ na-egbo mkpa m kpamkpam. Mmetụta mmiri dị na kichin m ka mma ebe ọ bụ na anyị dochiri mmiri mmiri ochie. Ana m akwado ezigbo ego a ọ gwụla ma ị na-achọ ụdị deluxe nke ga-abụ 3 ma ọ bụ 4 ugboro ọnụahịa ahụ.
Enwere m nsogbu ịwụnye mana nke ahụ bụ n'ihi na e meghara ihe nsiri m nke ọma. Mgbe m nwesịrị nsogbu ọ dị mfe! My ọhụrụ foset mara mma ma mara! Obi dị m ezigbo ụtọ na m nwere ọkpọkọ mmiri toro ogologo na enweghịzị m mkpa iji iko meju mmiri m toro ogologo. Nwepụta ihe dị mma dịkwa mma!
Ezigbo mmiri a na-ere ihe karịrị $ 200 n'ụlọ nchekwa ụlọ na akwụkwọ nri! Daalụ maka ịchekwa m nnukwu ego !!
A zụrụ nke a dị ka nkwalite maka mmezi m na kichin, nke dochiri pọmpụ 20 + yo. dị ka ịdị elu ka i wee jupụta nnukwu ite ma hichaa ya. -enwe a iyi na ịgba ọrụ niile na otu onye na a aka nke a button bụ oké mma, leghaara igwe anaghị agba nchara imecha dị mma ma dị ọcha na-achọ. Nnukwu uru maka ọnụahịa ahụ.
WOWOW Matte Black Kitchen igwekota Taps